10 Anime-amaghị Anime na Akwụkwọ ikike na West - Ndị Ọzọ
10 Anime na-erughị Anime ụfọdụ ketdị ikikere na Western Market
Ebe e si nweta ihe oyiyi: zerochan.net
A na-enye ọtụtụ ikike aha ma wee chefuo ha ebe ndị ọzọ na-aga akwụkwọ n'agbanyeghị agbanyeghị ndị mmadụ na ndị a ma ama. Edemede a lere anya na 10 nke ikikere nke edoghị ugbu a na ahịa Western.
1 - Ngbanwe nke ihe
Isi ihe onyonyo: Nnọọ weebụsaịtị
Nwere ikike site na FUNimation nwa oge, anyi anughi ihe obula banyere aha a kamgbe o mechara ikuku. Ọ bụ ezie na FUNimation ewepụla oge ya ma nwee ike ịsị na ọ ga-abụ na ọ ga-abụ na ọ ga-abụ na ọ ga-abụ na ọ ga-ekwe ka ndị ikikere ha kwụrụ ezigbo ego ka ha na-egbu oge, ọ dị ka ihe ijuanya na enwebeghị ọganihu maka aha a.
Ikekwe akụkụ ndị Japan na-ejigide ntọhapụ mana otu ihe doro anya, oge maka ịtọhapụ nke Concrete Revolutio na-egosi na ọ na-agba ọsọ.
Elebara anya na West, Gintama mechara nweta mbupute izizi ya na mpaghara ọdịda anyanwụ mgbe Sentai Filmworks wepụtara mmemme 49 izizi na DVD edebiri na 2010 na 2011.
N'ikpeazụ, ihe nkiri a na-emegharị ahụ ga-ahụkwa nhapụ, nke a na-akpọ Sentai n'asụsụ Bekee; mana kemgbe ahụ ha ahapụbeghị otu Gintama onwunwe. Ọ dị mma iche na ikike aha, na atụmatụ Sentai, anwụọla. Ma mgbe ahụ, olileanya dịghachi ndụ n'oge na-adịbeghị anya maka ndị Fans mgbe Crunchyroll malitere ịhapụ mmemme nke usoro ahụ na mgbe ahụ FUNimation mere DVD / BD ntọhapụ nke usoro ihe omume na-adịbeghị anya.
Ya mere, gịnị bụ nsogbu ahụ? Nsogbu bụ Funimation naanị wepụtara ngosipụta site na akụkụ ikpeazụ nke usoro ahụ, ọ bụghị mmalite.
Yabụ ugbu a anyị nwere ihe karịrị otu narị mmemme nke Crunchyroll kwetara na ọ nweghị ikike ya, anyị nwere ike ịkọ nkọ n'ihi Sentai na-ejidere ikikere ha anaghị eji ọzọ, na-enweghị echiche ma ọ bụrụ na a ga-akpọ ha aha, ma ya fọdụ ịhapụ ha na mgbasa ozi nkịtị.
Toghara ịkọwa ya nwere ike ọ gaghị abụrịrị ego bara uru ịhapụ ihe ndị ahụ ọ bụ ezie na nke a bụ ihe naanị Crunchy na Funi ga-ama n'oge a.
Isi mmalite ihe osise: Si na usoro Lyrical Nanoha TV
Ma oge izizi na nke abụọ nke aha ikike ka Geneon Entertainment nyere ikike wee wepụta ya na dub n'etiti 2000.
Kemgbe okuku nke ahịa anime n'agbanyeghị, ọ nweghị mmepe na-esochi aha Nanoha na ọdịda anyanwụ. StrikerS, oge abụọ nke Vivid na ihe nkiri na-anọgide na-enweghị ntọhapụ anụ ahụ, ma ya fọdụ dub, na ihe niile enyerela anyị aka anyị bụ iyi iwu maka ụfọdụ aha ndị a.
iberibe ndụ anime na hulu
Site na ikike ikike ka na-agbasi ike ihe ọ bụla nwere ike ime, mana gịnị kpatara na ihe ọbụla enwebeghị ihe ga-eme na nke ọ bụla nke usoro a na-ewepụtaghị na ihe nkiri bụ echiche onye ọ bụla na nke a.
Enwere nkọwa ụfọdụ na Aniplex nwere ike itinye aka n'agbanyeghị na enweghị ezigbo ihe akaebe na ihu ahụ. Otu olile anya olile anya bụ mmeghe nkiri Western nke ihe nkiri Nanoha nke yiri ka ọ na-egosi akụkụ ụlọ ọrụ Japan dịkarịa ala ka nwere mmasị na ahịa Western.
4 - Fate / kaleid liner Prisma ☆ Illya 3rei !! (Ma ọ bụ oge 4) + Ihe nkiri ahụ
Sentai Filmworks nyere ikike, kpọọ ma wepụta oge atọ mbụ nke usoro a maka West. Oge nke anọ na ihe nkiri ahụ ewepụtabeghị ma ọ nweghị okwu banyere ikikere ha.
Amachaghị ihe na-eme na aha a. Ọ bụ akụkụ nke oke akara aka / ikike ma dịka o yiri ka ọ gaghị aba uru ma ọ bụ gbahapụ.
Crunchyroll na Sentai na-alụ ọgụ maka aha ndị na-adịbeghị anya na ikekwe ọ bụ FUNimation, site na Crunchyroll, na ugbu a nwere ikike ịbanye ọhụrụ nke aha a mana ọ bụrụ na ọ bụ ya, gịnị kpatara na ha ekwughi okwu banyere ya.
N'ezie, Funimation egosiputa enweghị nsọpụrụ siri ike mgbe a bịara na utu aha ha wepụtara site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka anyị ahụla ịdọ aka ná ntị dị nta maka Kabaneri nke Iron Fortress na Re: Zero. Agbanyeghi na emechara emesia otu onye maka nnwepu aru na Re: Ekpugheworị ikpughe dub na ọrụ.
Ruo ugbu a, ọ nweghị okwu ọ bụla gbasara ihe ga-eme na ọrụ ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu nke ngalaba a nke aha na oge ịkwụsị maka onye na-ekwupụta na ha enyela ya ikikere na-agba ọsọ ọsọ.
5 - Oge Phi-Brain
Isi ihe onyonyo: Crunchyroll’s Page maka usoro
A tọhapụrụ ma oge mbụ na nke abụọ na BD na DVD na Sentai Filmworks na dub na nke ahụ laghachiri na 2013. Kemgbe ahụ, oge nke atọ na nke ikpeazụ, ọ bụ ezie na ikikere, enweghị Sentai ahapụla ma ọ bụ kwukwa okwu banyere Sentai maka anụ ahụ. mgbasa ozi.
kacha mma iberi nke ndụ romance Anime
Ma eleghị anya, anyị nwere ike ịkọ oge otu na abụọ anaghị ere ahịa nke ọma ma ya mere ha kpebiri ịnọdụ ala na ikikere mana ị ga-eche na ha gaara ewepụta ya na agbanyeghị iji nwetaghachi ụgwọ.
N'ezie, Sentai kwuru na ihe ọ bụla ha malitere dubbing ga-ahụ ihe ọ bụla ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụ ntụgharị ihu ga-enwetakwa dub ma n'ihi ya, ha nwere ike kpebie na ọ bụrụ na oge nke atọ abaghị uru ịghaghachi, ọ baghị uru ịhapụ ma ọlị. Ọ bụ ezie na dub ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ ka na-achọ ịmata na mgbe Sentai wepụrụ aha ha site na Anime Network to HIDIVE, oge otu na abụọ nke usoro ahụ bufere ma oge nke atọ emeghị.
O yikarịrị ka ọ ga-abụ n'oge a na anyị ga-ahụ ntọhapụ anụ ahụ nke aha a n'oge na-adịghị anya mana ihe kachasị bụrụ ihe nkoropụ bụ ịjụ Sentai ịjụ imelite ndị fans na ọnọdụ ahụ.
6 - Rock Lee & ya Ninja Pals
Isi ihe onyonyo: TV Tokyo
Laa azụ na 2012, VIZ nwere ikikere, nke edepụtara wee gụchaa Rock Lee na Ninja Pals ya mana n'adịghị ka njirimara ndị ọzọ nke aha Naruto, ọ hụghị ntọhapụ anụ ahụ.
Ọbụna Australia (Site Madman Entertainment) wepụtara aha na vidiyo ụlọ; ọ bụ ezie na ọ bụ naanị na DVD.
O yiri ka ọ bụ ihe ijuanya na VIZ emeghị ihe ọ bụla na nke a, ikekwe ọnụ ọgụgụ ndị na-asọpụta dị njọ, mana n'oge a ọ dị ka ọ nwere ike ịhapụ nnwere onwe agaghị elu, ma ọ bụ site na VIZ opekata mpe.
7 - Boruto: Naruto Na-esote Ọgbọ
Ntinye ohuru ama ama ama na aha Naruto, Boruto, yiri ka ọ ga-ahụ ntọhapụ anụ ahụ n'oge ụfọdụ. Ma, enweghị ozi ọ bụla n'usoro ahụ na-akụda mmụọ.
VIZ nwere ikike maka Boruto yana ikike ịhapụ anụ ahụ. Ọ bụ ezie na a na-asọba ya ugbu a na Crunchyroll, ọ nweghị ozi ọma nke dub ma ọ bụ nke ntọhapụ vidiyo ụlọ; ọbụnadị nkwenye nke ụdị ọrụ a nọ n'ọrụ.
Ọ bụ ezie na anyị ahụla site na Funimation si njikwa nke Dragon Ball Super na VIZ na njikwa nke Hunter x Hunter na usoro profaịlụ dị elu nwere ike ịnọ jụụ ruo mgbe ha dị njikere ịhapụ, ọ ka nwere ike ịbụ ogologo oge na-enweghị nchekwube maka ndị fan.
Ọ bụrụ na m ga-akụ nzọ, a ga-ekwuputa ọkwa maka mgbapụta anụ ahụ ma ọ bụrụ na ha gafere ihe omume 100 ma ọ bụ mgbe Shippuden DVD setịpụrụ ahapụla ntọhapụ ha.
8 - Ogbugbu amoosu: Operation Victory Arrow
Oge abụọ nke Strike Witches na ihe nkiri a nyere ikikere, nke a na-akpọ ma wepụta site na Funimation na usoro ọhụụ Brave Witches anatalarị dub ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ ga-ahụrịrị na ọ ga-ewepụta n'oge na-adịghị anya. Ma gịnị banyere 2014 OVA Operation Victory Arrow?
Funimation enyebeghị ikikere ma ọ bụ kpọọkwa OVA yana yana akụkọ ihe mere eme ha na OVA nke ọbụnadị ahaziri ahazi yana oge gafere kemgbe a tọhapụrụ ya, ọ na-eme ka anyị nwe obi abụọ na anyị ga-ahụrịrị mwepụta anụ ahụ nke ngalaba a. .
9 - Ọbara +
Isi ihe onyonyo: Production ihe nkwado IG
Usoro a bidoro na 2005 wee chọta ụzọ ya, akpọrọ ya, na TV ndị America na 2007. E wepụtara ya na DVD na mpịakọta olu nke na-ezughi oke ruo taa wee wepụta ya na abụọ, 25 ngosipụta igbe dị na 2009.
A naghị ebipụta usoro abụọ a. Anyị amabeghị ihe ga - eme n'usoro isiokwu a: Ọ bụrụ na ọ ga - alaghachi, ọ bụrụ na ọ ga - enweta BD na ihe ndị ọzọ ... Ma na Sony, onye na - ejide ikikere ahụ, zụrụ Funimation, ikekwe nke a ga - emepe ọhụụ ohere maka ọdịnihu dị nso; ma ọ bụ ya mere Fans na-atụ anya.
10. - Mushishi: Isi nke Abụọ (Ma ọ bụ Oge 2)
Akwụkwọ ikike nyere ikikere Mushishi, nke akpọrọ ma wepụta na 2007 - 2008 na mpịakọta, wee banye na igbe edebere na 2008 na n'ikpeazụ, see SAVE Edition na 2011.
Agbanyeghị oge izizi ewepụtara na blu-ray ma ọ ga-abụ na ọ gaghị ahụ ụdị ọgwụgwọ ahụ n'ọdịnihu dị nso. Usoro Mushishi mechara hụ usoro nke 1 hour pụrụ iche (Hihamukage), usoro usoro (Isi na-esote) na ihe nkiri (Adamegharị arc ikpeazụ nke manga); ihe niile a bụ nke Aniplex nyere ikikere mana ahapụghị ya.
Dị ka akwụkwọ ikike Aniplex ndị ọzọ, anyị anụbeghịkwa ihe ọ bụla gbasara ya.
N'otu oge, Madman Australia na-edepụta ntọhapụ maka oge nke abụọ ma gosipụta na ọ nwere dub, mana ewepụrụ ndepụta a n'ime ụbọchị.
Ka oge na-aga, Mushishi bụ onye a na-enweghị mmasị (Ma ọ bụ opekata mpe, ọ ga-enye ego maka ndị isi ụlọ ọrụ iji lekọta) nnabata na ọdịda anyanwụ na ọtụtụ akara ọgbaghara dị na steeti ikike, ọ bụ onye ọ bụla na-eche echiche ma ọ bụrụ na ndị ọzọ Mushishi ga-ebi hapụ ya.
Nke a bụ ya, maka ugbu a ọ dịkarịa ala. Enwere ọtụtụ aha ndị ọzọ na ọnọdụ yiri nke a ma eleghị anya, m ga-eme isiokwu ọzọ na isiokwu ahụ n'oge ụfọdụ. Mana ugbu a, achọrọ m ịkwaga isiokwu dị iche iche.
kacha mma romance iberi nke ndụ Anime
Dị ka ọ dị na mbụ, ọ bụrụ na ịnwere ozi ma ọ bụ echiche banyere aha ndị na-esonụ na ọnọdụ ha, egbula oge ịza ajụjụ.
Edemede a bụ Gabriel Persechino-Forest site na Sakura Anime News Blog.
5 Akwụkwọ ikike a na-ejighị n'aka (Nkebi nke 1)
5 Akwụkwọ ikike a na-ejighị n'aka (Nkebi nke 2)
iberi ndụ romance ntochi anime
mma kacha mma nke ndụ Anime 2018
kacha mma anime tv na-egosi oge niile
kacha mma ntochi anime niile oge